How to dominate Amazon search ranking system?
Chigadzirwa chakakwirira pamusoro peAmazon chinokwana nehombe yekutengesa sezvo vazhinji vashandisi vakananga pamusoro pekutanga kwezvavanoona pa Amazon SERP vachivapindura sevanonyanya kunaka. Kuti uite zvigadzirwa zvako zvinowanikwa papeji pekutsvaga tsvaga, unoda kunzwisisa kuti maA9's A9 search ranking algorithm inoshanda sei.
Muchikamu chino, tichakurukura rimwe basa rinokosha reAmerica rakarongedza kushandiswa kwegoridhe uye kunyatsotarisa chimwe nechimwe chezvinhu.
A9 kana kuti Amazon tsanangudzo yekutsvaga
Maererano nekuongorora kwechangobva kuitwa ne PowerReviews, vatengi vanopfuura 1 000 veUnited States vanotanga kutsvakurudza maAmerica - mahogany outdoor chairs. Google inouya yechipiri yapfuura, inoteverwa nedzimwe nzvimbo dzinowanikwa e-commerce. Vanhu ivavo vanotanga mishonga yavo yekutsvakurudza kuAmazon, vachitsanangura kusarudzwa kwavo kuburikidza nekusarudzwa kwekugadzirwa kwezvinhu, kubvunzurudza, kutumira pachena, uye kutengesa.
Kuongorora uku kunoratidza kuti simba iri rekutengesa riri pawebhu. Inopa mikana yakawanda uye inobatsira kune vatengesi. Zvisinei, iwe unoda kurwisana nemakambani ako emakwikwi kuitira kuti zvinhu zvako zvioneke pa Amazon SERP.
Kukwikwidza, unofanira kuziva kuti Amazon A9 algorithm inoshanda sei. Chokutanga pane zvose, zvinofanira kuonekwa kuti A9 yakasiyana zvachose neGoogle. Kana mutengi ari kutsvaga chinhu chinodiwa kuAmazon, tsvaga zvitsva zvinowanikwa kuburikidza nedanho rekutanga-mbiri. Pakutanga rekutanga, vashandisi vanowana zvakakosha zvikuru kune mhinduro dzemhinduro kubva mumabhuku. Pamuganhu wechipiri, izvi zvose zvinowanikwa maererano nehutano nekududzirwa. Chinangwa chikuru cheAmazon ndechekuwedzera kambani yekambani yemari kune umwe neumwe mutengi. Kana shamba yako yepaIndaneti inounza mari yakawanda kuAmazon, inonyanya kuve yakakosha pane TOP pamusoro pekutsvaga peji peji. Amazon inoramba ichishanda pasi payo maitiro ekuvandudza maitiro ekuvandudza. Pari zvino, vanofungisisa zvinhu zvakadai sekushandiswa kwevashandisi, purogiramu yekuongorora, key business metrics uye kushanda metrics.
Zvikamu zvinokosha zveAngland tsvaga kugadzirisa maitiro
Pane zvinhu zvitatu zvinoshandiswa pakugadzirisa Amazon inotarisa mhando yezvinhu zvakagadziriswa pakutsvaga peji peji:
Zviitiko zvinogona kukanganisa kutendeuka kunosanganisira kuongorora, hutano, uye hukuru hwemifananidzo uye mutengo wekutengesa. Kana iwe uchida kuva nekutendeuka kwakakwirira, unoda kuchengetedza mitengo yako kukwikwidza. Zvakare, zvakakosha kuunza mhinduro yakanaka kune zvigadzirwa zvako sezvo inopa pfungwa yevangangodaro vatengi pamusoro pechirumbira chako.
Chinhu chinonyanya kuudza Amazon kana uchitarisa peji yako yezvigadzirwa nokuda kwekutsvaga tsva. Ndiko kusaka zvipfeko zvako zvose zvinofanira kunge zvichinyatsoenderana nemubvunzo wemushandisi. Kuti uvandudze chinhu ichi, unoda kushanda pasi pehurukuro yako uye tsanangudzo uye pasi pekuverenga kwako. Zvose izvi zvikamu zvinoda kunge zvakanyatsogadziriswa uye zvinosanganisira yako inotsvaga kutsvaga mazwi.
Izvi zvinobatsira kutsigirwa kwevatengi kusanganisira kugadzirisa mutengesi uye kurongeka kwekushaya. Saka, chakavanzika chiri nyore. Unofanirwa kugutsa zvido zvevabereki vako, uye vachadzoka kwauri. Iyo yakajeka maongororwo aunoita pane peji rako, mikana yakakwirira iwe uchakwevera vamwe vangave vatengi kune peji rako.